Adobe Lightroom wuxuu gaaraa 6.0 si uu u ahaado kan ugu fiican | Androidsis
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Sawir, Noticias
Iyadoo waxaan leenahay Photoshop Camera oo ah barnaamijka ugufiican oo leh filtarada ugufiican oo aan beryahan aragnay, Lightroom isla Adobe ah oo leh cusboonaysiinkan weyn ayaa la helay weli ugu fiican tafatirka sawir.
Annaguna waxaan nidhaahnaa maxaa yeelay heer farsamo waxay ku dartay taxane sheeko-xariir ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan taabano aasaaska sawiradeena sida kuwa kale. Waxaan ogaan doonnaa faahfaahintaas codsi kuu oggolaanaya inaad keydiso taabashada kombuyuutarka ama laptop-ka si aad uga tagto isku-darka heer xirfadeed.
1 Waxyaabaha ugu horreeya marka hore: hagaajinta midabka wanaagsan
2 Noocyada wax ka beddelka sawirkaaga
3 Kudar calaamado-biyoodyo oo wax ka baro sayidyada
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore: hagaajinta midabka wanaagsan
Nooca 6.0 Adobe ayaa rabay ku dheji qoraalka midabka leh qalab taxane ah taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan ku milicsanno heerka farsamo ee qofku u yeelan karo inuu dib u soo celiyo sawirrada oo markaa kaamil ah. Xaqiiqdii, hadda waxaan leenahay aag waxbarasho halkaas oo sawirqaadayaal khibrad leh ay noogu barayaan casharro leh hagitaanno tallaabo tallaabo ah.
Hadda waan awoodi doonnaa ku hagaaji midabka midabada ee hooska, dhexda, iyo iftiiminta iyada oo loo marayo shaag midab leh. Taasi waa, waxaan haynaa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee dib loogu hagaajin karo codadka seddex walxood oo muhiim ah si loo hagaajiyo isu dheelitirka midabka ee sawiradeena. Sida aad ku arki karto sawirada si fudud waa wax cajiib ah.
Hadiise giraangirahan waxaan ku dareynaa awooda lagu doorto midabada ugu muhiimsan ee midabada si loo hagaajiyo xoogooda iyo si fiican u mari jaale meelaha qaarkood ee sawirka ama hooska mugdiga ku madoobaw buluug madow, tani waa aalad muhiim u ah tafatirka kuwa aan dooneynin inay dhex maraan PC.
Noocyada wax ka beddelka sawirkaaga
Mid kale oo ka mid ah walxaha cusub ayaa ah noocyada waana ay sameyn doonaan u oggolow abuuritaanka nooc la magacaabay si loo ilaaliyo tifaftirka aan sameyno wakhti kasta. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan adeegsanayno qaar ka mid ah horayna loo dejiyay si aan ugu xilsaarno taxaneyaal halbeegyo midab, iftiin, isbarbardhig, xoog iyo wax ka badan, waxaan awood u leenahay inaan ku badbaadinno mid kasta oo ka mid ah daabacaaddan magac.
Asi waxaan tagi karnaa isbarbardhiga noocyada kala duwan oo si fiican u qiimee halka ay tahay inaan aadno daabacaadda soo socota. Tani waa halka Lightroom ay u timaaddo si ay u abuurto noocyo otomaatig ah marka aan wax ka beddeleyno sawirradeena. Waxaan tagnaa daaqadda wax ka beddelka waxaanan haysannaa dhammaan noocyadaas gacanta oo dhan si aan dib ugu laabanno ama aan horay ugu sii soconno shaqadeenna hal-abuurka ah.
Daaqadaas waxaan magacaabi karnaa magac si ay u kaydiso sidaan wax u tafatirno oo aan ugu laabanno mid ama mid kale dhammaan raaxada adduunka.
Kudar calaamado-biyoodyo oo wax ka baro sayidyada
Waxyaabo kale oo ku cusub Adobe Lightroom waa xaqiiqda aan hadda awoodno kudar calaamado sawirradeenna inaan ka dhoofino isla barnaamijka isla markaana aan u daayo inay diyaar u noqdaan mashruuc ama shabakadaas bulshada ee aan ku darsaneyno shaqadeena.
Dhinaca kale, waxaan leenahay tabka barashada kaas oo waxaan wakhti fiican ku heli karnaa inaan wax ka barano sawir qaadayaasha xirfadleyda ah in, casharadooda, ay ina bari doonaan sida loo isticmaalo halbeeg kasta oo Adobe Lightroom ah oo aad iyo aad u sii adkaanaya, taasna waxay ku mahadsan tahay tilmaamahan waxaan si fiican u fahmi doonnaa sida loo sameeyo loona saxo sawir. Runtii waa wax lala yaabo sida sahlan ee mid kasta oo ka mid ah casharradan loo raaco.
Sida oo kale waxaan leenahay guddiga Soo hel taasna waxay noo oggolaaneysaa inaan sidoo kale raacno shaqooyinka hal-abuurka ah boqolaal xirfadlayaal ah iyo isticmaaleyaal u dhoofiya shaqadooda Creative Cloud.
Hadaad leedahay Adobe Lightroom ayaa la rakibay, kaliya waa inaad marto Play Store si loo cusbooneysiiyo noocaan ah 6.0 kaas oo qaata tafatirka taleefanka gacanta illaa heer kale isla markaana awood u leh inuu iloobo isla barnaamijkii ku jiray laptop-ka ama PC-ga. Yaab.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Adobe Lightroom wuxuu helaa cusbooneysiin weyn si uu u noqdo barnaamijka ugu fiican ee tafatirka sawirrada
Hadda waa suurtogal in la aamusiyo kooxaha WhatsApp weligood, waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo
OnePlus 7 iyo OnePlus 7T waxay helayaan cusbooneysiin cusub oo leh cilado badan